Ubukhetha njani ubungakanani bomphetho kwivili?
Iirim kufuneka ibe nobubanzi obulinganayo nobubanzi obungaphakathi kwitayara, kukho ubungakanani obulungileyo beerim kwivili ngalinye elilandela imigangatho yehlabathi efana ne-ETRTO kunye ne-TRA. Unokujonga kwakhona itayiti kunye nerim efanelekileyo yokutshata kunye nomthengisi wakho.
yintoni i-1-pc rim?
I-1-PC rim, ekwabizwa ngokuba yi-single-piece rim, yenziwa ngesiqwenga esinye sesinyithi kwisiseko se rim kwaye yenziwa yohlobo olwahlukileyo lweeprofayili, i-1-PC rim ihlala ilingana nama-25 ", njengomphetho weloli i-1- I-PC rim inobunzima bokukhanya, umthwalo olula kunye nesantya esiphezulu, isetyenziswa ngokubanzi kwizithuthi ezilula ezifana netrektara yezolimo, inqwelwana erhuqwayo, isiphatho sefowuni, isavali-vili, kunye nolunye uhlobo loomatshini bendlela. Umthwalo we-1-PC rim ulula.
yintoni i-3-pc rim?
I-3-PC rim, ekwabizwa ngokuba yi-piece-rim rim, yenziwa ngamaqhekeza amathathu asisiseko se-rim, iringi yokutshixa kunye ne-flange. I-3-PC rim ihlala ibukhulu be-12.00-25 / 1.5, 14.00-25 / 1.5 kunye no-17.00-25 / 1.7. I-3-PC inobunzima obuphakathi, umthwalo ophakathi kunye nesantya esiphezulu, isetyenziswa ngokubanzi kwizixhobo zokwakha ezinje ngee-graders, ezincinci kunye neziphakathi zokulayisha ivili kunye neefolokhwe. Inokulayisha ngaphezulu kwe-1-PC rim kodwa kukho umda wesantya.
yintoni i-4-pc rim?
I-5-PC rim, ekwabizwa ngokuba yiziqwenga ezintlanu, yenziwe ngamanqwanqwa amahlanu asisiseko se-rim, iringi yokutshixa, isihlalo sebhedi kunye namakhonkco amabini asecaleni. I-5-PC rim ihlala ibukhulu be-19.50-25 / 2.5 ukuya kuthi ga kwi-19.50-49 / 4.0, ezinye iirim ukusuka kubukhulu 51 "ukuya ku-63" nazo ziziqwenga ezintlanu. I-5-PC rim inobunzima obunzima, umthwalo onzima kunye nesantya esisezantsi, isetyenziswa ngokubanzi kwizixhobo zokwakha kunye nezixhobo zokumbiwa kwemigodi, njengee-dozers, ii-wheel loaders ezinkulu, ii-haulers ezichaziweyo, iilori zokulahla inkunkuma kunye nabanye oomatshini bezemigodi.
Zingaphi iintlobo zerim ye forklift?
Zininzi iintlobo zerim zeforklift, ezichazwe ngokwakhiwa kwazo zinokwahlulahlula irim, 2-PC, 3-PC kunye ne-4-PC. Umtya owahluliweyo mncinci kwaye ulula kwaye usetyenziswa yifolokhwe encinci, i-2-PC rim zihlala zikhulu ngobukhulu, i-3-PC kunye ne-4-PC rim zisetyenziswa yifolk ephakathi kunye enkulu. Iifayile ze-3-PC kunye ne-4-PC ubukhulu becala ubukhulu obuncinci kunye noyilo oluntsonkothileyo, kodwa banokuthwala umthwalo omkhulu kunye nesantya esiphezulu.
Leliphi ixesha lokukhokela?
Sihlala siyigqiba imveliso kwiiveki ezi-4 kwaye sinokunciphisa ukuya kwiiveki ezi-2 xa imeko ingxamisekile. Kuxhomekeka kwindawo ekuyiwa kuyo ixesha lokuhamba linokuba kwiiveki ezi-2 ukuya kwiiveki ezi-6, ke lilonke ixesha elikhokelayo ziiveki ezi-6 ukuya kwiiveki ezili-10.
Sivelisa kungekuphela nje umqukumbelo ogqityiweyo kodwa kunye nezinto zerim, sikwanikezela kwi-OEM yehlabathi njenge-CAT kunye neVolvo, ke izibonelelo zethu ziluhlu olupheleleyo lweemveliso, iCandelo loShishino luphela, umgangatho oqinisekisiweyo kunye neR & D eyomeleleyo.
Yeyiphi imigangatho yemveliso oyilandelayo?
Iirim zethu ze-OTR zisebenzisa i-ETRTO kunye ne-TRA.
Luhlobo luni lwepeyinti onokuyenza?
Ukupeyinta kwethu kokuqala yi-E-coating, ipeyinti yethu ephezulu ngumgubo kunye nepeyinti emanzi.
Zingaphi iindidi zamacandelo omtya onawo?
Sinezangqa zokutshixa, iringi esecaleni, isihlalo sebhedi, isitshixo somqhubi kunye neflange kwiintlobo ezahlukeneyo zeerim ukusuka kubungakanani be-4 "ukuya ku-63".